Sajhasabal.com |महिलाले यदि पुरुषलाई जबरजस्ती गरे के त्यो बलात्कार हो ?
एजेन्सी | कुनैएउटा पुरुषले महिलामाथि उनको इच्छा बिपरित जबरजस्ती यौन सम्बन्ध स्थापित गर्छ भने त्यो बलात्कार हो तर यदि महिलाले पुरुषलाई उनको मर्जी बिना यस्तो गर्न बाध्य बनाए के त्यो पनि बलात्कार होइन र ? इंगल्याण्ड र वेल्सको कानूनमा यो बलात्कार होइन तर यो घटनामाथि अध्ययन गर्ने एक लेखकले सायद यसलाई पनि बलात्कारको संज्ञा दिनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छिन् ।
लेंकास्टर युनिभर्सिटी ल स्कूलकी डाक्टर सियोभान वियरेले ब्रिटेनमा सन् २०१६–१७ का क्रममा जबरजस्ती यौन सम्बन्धमाथि पहिलो अनुसन्धान गरेकी छिन् । यसमा उनले २ सय बढी पुरुषको अनलाइन सर्वेक्षणमार्फत् सूचना संकलन गरिन् ।
उनले सन् २०१८ र जुलाई २०१९ बीच ३० पुरुषसँग व्यक्तिगत अन्तरवार्ता गरिन् । यो शोध हालै प्रकाशित भयो । यसमा जबरजस्ती यौन सम्बन्ध स्थापित भएको खण्डमा यसको परिणाम के हुन्छ र कानूनी कारवाही कस्तो हुन्छ भनेर विस्तृत चर्चा गरिएको छ ।
कुराकानी गरिएका सबैको नाम गोप्य राखिएको छ तर हामी तीमध्ये एकलाई जोनको नामले बोलाउँछौं । जोनका अनुसार केही गलत भइरहेको पहिलो पटक महसुस त्यतिबेला भयो जब उनका पार्टनरले आफूलाई नै हानी गर्न सुरु गरिन् ।
एक डरलाग्दो घटनापछि उनले पार्टनरलाई उपचारका लागि लगे जहाँ दम्पत्तिले यस पछाडिको मनोवैज्ञानिक कारणमाथि घण्टौं कुरा गरे । लगभग ६ महिनापछि उनकी पार्टनरले आफूलाई चोट पुर्‍याउनुको साटो जोनलाई नै निशाना बनाउन सुरु गरिन् ।
जोन भन्छिन्, ‘म लिभिङ रुममा बसेको थिएँ र उनी किचनबाट आइन् । त्यसपछि मेरो नाकमा बेस्सरी हानिन् र छिल्लिँदै हाँस्दै भागिन् । त्यो दिनदेखि दिनदिनै झगडा हुन सुरु भयो ।’ पछि उनले आफ्नो डाक्टरसँग मद्दत लिने कोसिस गरिन् । उनको केही काउन्सिलिङ पनि भएको थियो र उनलाई मनोवैज्ञानिक तरिकाले उपचार गर्न सल्लाह दिइएको थियो ।
जोन भन्छन्, ‘मेरी पार्टनर अफिसबाट घर आउनेबित्तिकै सेक्सको माग गर्न थालिन् । उनी हिंस्रक हुन थालिन् र स्थिती यहाँसम्म पुग्यो कि पार्टनर घर आउने कुरा सोचेरै म डराउन थालेँ ।’ एकदिन जोनको आँखा खुल्दा उनले आफ्नो दाहिने हात बेडको फ्रेमसँग हत्कडीले बाँधिएको पाए । यस्तो उनको पार्टनरले गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि बेड नजिकै राखिएको स्टेरियो सिस्टमको लाउड स्पिकरले उनलाई टाउकोमा हान्न सुरु गरिन् र उनको अर्को हात नायलनको डोरीले बाँधिन् र उनलाई सेक्स गर्न दबाब दिइन् ।
त्यसपछि उनले पार्टनरले आफूलाई जबरजस्ती भियाग्रा खुवाएको र उनको मुख बन्द गरिदिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘म केही गर्न सक्दिनथेँ । त्यसपछि म नुहाउन गएँ र मलाई थाहा भएन कि म कतिबेर सम्म शवरमा थिएँ । त्यसपछि म कोठामा छिरे, उनको पहिलो प्रश्न थियो, ‘रातीको खानामा के छ ?’’ जब जोनले यसबारे मानिसहरुलाई बताउन सुरु गरे तब कसैलाई पनि उनको विश्वास लागेन ।
अनुसन्धानको नतिजाः यस्ता अनुभवको रिपोर्ट गर्न पुरुषलाई धेरैजसो लज्जाको महसुस हुन्छ । उनीहरु यौन शोषणबारे उल्लेख नगरिकनै घरेलु हिंसाको रिर्पाट गर्छन् । यसले पुरुषहरुको दिमागमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ, आत्महत्याको विचार आउन सक्छ र यौन क्षमतामा ह्रास आउँछ ।
केही पुरुषले पटक–पटक पीडित भएको कुरा गरे । केही वाल्यकालमा यौन शोषणबाट पीडित थिए, कतिले विभिन्न तरिकाले यौन हिंसा सहन गरे । यस्ता पुरुषमा पुलिस, न्यायिक प्रणाली र कानूनका विषयमा विभिन्न नकारात्मक धारणा थियो ।
वियरेको शोधमा एक मिथ यो पनि सार्वजनिक भएको छ कि पुरुषसँग जबरजस्ती सेक्स असम्भव छ किनभने पुरुष महिलाको तुलनामा शारीरिक रुपमा बलियो हुन्छन् । दोस्रो यो हो कि पुरुष महिलासँग सबै यौन अवसरलाई सकारात्मक मान्छन् ।
तेस्रो मिथ यो हो कि यदि पुरुषमा उत्तेजना हुन्छ भने यसको अर्थ यो हो कि उनीहरुलाई पक्कै पनि सेक्स चाहिन्छ । वियरे भन्छन्, ‘वास्तवमा उत्तेजना विशुद्ध एक शारीरिक प्रतिक्रिया हो ।’
उनी भन्छिन्, ‘यदि पुरुष डराएका छन्, क्रोधित र भयभीत आदि छन् भने उनीहरु उत्तेजित हुन सक्छन् र भइरहन सक्छन् । यस्तो शोध पनि छन् जसले देखाउँछन् कि महिलामाथि बलात्कार हुँदा उनीहरु पनि सेक्सुअली एक्टिभ हुनसक्छन् किनभने उनीहरुको शरीर शारीरिक रुपले प्रतिक्रिया दिन्छ । यो पुरुष र महिला दुबै पीडितका लागि एक मुद्दा हो जसमाथि पर्याप्त चर्चा गरिएको छैन । यसबारे स्पष्ट प्रमाण छ ।’
कुराकानीका क्रममा एकले बताए अनुसार एक महिलासँग रातभरी क्लबमा पार्टी गरेपछि जब उनी घर फर्किरहेका थिए तब उनलाई डेट रेपको औषधी दिइयो र जबरजस्ती सेक्स गर्नका लागि बाध्य बनाइयो ।
अर्का एक व्यक्तिले आफू एक छात्र भएका बेला समय क्याम्पमा उनलाई सेक्सका लागि बाध्य गरिएको बताए ।
वियरेका अनुसार ताजा अध्ययनमा आधिकांश सहभागीले आफ्नो जबरजस्ती सेक्सको अनुभवलाई ‘बलात्कार’ को संज्ञा दिएका छन् । यसलाई इंग्ल्याण्ड र वेल्सको कानूनमा बलात्कारको रुपमा नलिएकोमा उनीहरु दुःखी छन् ।